I-ski-in, i-ski-out enamagumbi okulala ama-3 ~ I-Interlude 308
I-i-condominium (condo) ephelele ibungazwe ngu-Eliza
U-Eliza unokuphawula okungu-410 kwezinye izindawo.
UHLU OKUSHA OKUSHA! Kusanda kulungiswa kabusha, indawo yokulala ephezulu enamagumbi okulala ama-3, amagumbi okugezela ama-3 abheke endaweni ye-Snowmass Ski, enokufinyelela kalula e-ski-in, nokuskiya ngaphandle. Iyunithi inompheme ovulekile ozimele one-grill, indawo yokugcinwa kwe-ski, indawo yokupaka embozwe, indawo yomlilo yegesi kanye nekhishi eligcwele ngokugcwele, elilungiswe kahle. Ngemuva kosuku olugcwele lokushushuluza noma ukuqwala izintaba, ungahlala, uphumule futhi ululame kubhavu wethu omuhle osendaweni, wabantu abayi-18. I-IN308 ilala ngokunethezeka abantu abangaba yisishiyagalombili, inombhede wenkosi ku-master, inkosi ekamelweni lesi-2 kanye namasethi amabili emibhede engamawele egumbini lesi-3. Le ndlu yokulala engu-3 ewubukhazikhazi iyindawo efanelekile yokubalekela entabeni, kungakhathalekile isizini.
Siyakwamukela ku-Interlude 308! Le yunithi esanda kulungiswa, yesitezi esiphezulu itholakala eduze kweNtaba ye-Snowmass, efaka ukungena eqhweni okumangalisayo, nokufinyelela kokushushuluza. Itholakala enhliziyweni ye-Snowmass Village, ukude ngezinyathelo ukusuka e-Village Mall, umzila wamahhala webhasi oya emuva naphambili ungene e-Aspen, imizila yokuhamba izintaba nokuhamba ngebhayisikili nokunye okuningi.
Izivakashi zizofinyelela kuphela ku-condo yazo ngesikhathi sokuhlala kwazo. Isikhathi sokungena u-4:00pm, isikhathi sokuphuma u-10:00am. Ukungena ngaphambi kwesikhathi kanye nokuphuma sekwephuzile kukhonjelwe ekutholakaleni futhi kufanele kugunyazwe ideski langaphambili le-Laurelwood. Esizeni e-Interlude, kukhona ubhavu oshisayo osanda kwakhiwa wabantu abangu-18 okuyindlela enhle yokukhululeka ngemva kosuku olude lokushushuluza noma lokuqwala izintaba.
Kunendawo yokupaka eyodwa emboziwe khona kanye ngaphansi kwe-condo ngayinye. Endaweni yokupaka, kuneshede ongabeka kulo impahla (amabhayisikili, amabhayisikili, njll.) ukuze zigcinwe ngokuphephile. Uma udinga indawo yokupaka imoto eyengeziwe, ungase uthenge iphasi yokupaka edeskini langaphambili lase-Laurelwood ngo-$12.50/ngosuku enkathini yasebusika. Indawo yokupaka eyengeziwe imahhala ehlobo nasekwindla.
Le khondishi ifaka iwasha/isomisi esizosetshenziswa yizivakashi, kodwa sicela ukuthi uziphathele esakho okokugeza uma ufisa ukusisebenzisa. Wonke amalineni, amathawula, amathawula obhavu oshisayo anikeziwe, futhi ungacela okwengeziwe njengoba kudingeka. Sicela uqaphele, lesi sakhiwo asinayo i-A/C kodwa abalandeli bebhokisi bahlinzekwa ekamelweni ngalinye lokulala futhi basebenza kahle kakhulu ekupholiseni amagumbi ngokushesha.
Sinethimba ledeskithophu elisebenza ngokugcwele elisebenza kusukela ngo-8:00am-9:00pm ngezikhathi zasehlobo nasebusika kanye no-8:00am-5:00pm ngesikhathi esingekho isizini. Ithimba lethu lilapha ukuze likusize ngazo zonke izicelo ukuze wenze isiqiniseko sokuthi ukuhlala kwakho kungcono kakhulu! Esimeni esiphuthumayo, sinesevisi yokuphendula eziphuthumayo yangemva kwamahora izivakashi ezingawashayela ukuze zixhumane nomphathi wesayithi. Silapha ukuze senze ukuhlala kwakho kube okukhumbulayo!
Uzongena nedeski langaphambili le-Laurelwood elizokunikeza okhiye be-condo yakho kanye nolwazi olujwayelekile mayelana nesakhiwo nendawo. Abasebenzi bakhona ukuze bakusize nganoma yimiphi futhi yonke imibuzo noma okukukhathazayo ngesikhathi sokuhlala kwakho.
Uzongena nedeski langaphambili le-Laurelwood elizokunikeza okhiye be-condo yakho kanye nolwazi olujwayelekile mayelana nesakhiwo nendawo. Abasebenzi bakhona ukuze bakusize nganoma…